Ciise midnimo oo ku biirey kooxda Ull/kisa, heshiis 2-sano ahna u saxiixay - NorSom News
Ciise midnimo oo ku biirey kooxda Ull/kisa, heshiis 2-sano ahna u saxiixay
Captankii hore ee xulka qaranka kubada cagta Soomaliya, Ciise Aden Abshir(midnimo) ayaa ku biirey, heshiis labo sano ahna qalinka ugu duugay kooxda Ullensaker/kisa oo ka dhisan magaalada Oslo. Waxeyna qoraal ay ku sheegayaan saxiixa midnimo kusoo daabaceen ullkisafotball.no, oo ah bogooda rasmiga oo ay ku leeyihiin internetka. Iyaga oo tilmaamey in ciise uu yahay laacibkii ugu horeeyay oo ay ku guuleystaan saxiixiisa inta lagu jiray fasaxa xili-ciyaareedkan.
Ciise midnimo ayaa xili ciyaareedkii hore u ciyaari jiray kooxda KFUM oo ka hada u dagtay horyaalka heerka 3-aad ee wadankan Norway. Wuxuuna kooxdaas u saftay 28 kamid ah 30-kii kulan oo ay ciyaareen xili ciyaareedkii hore, isaga oo shabaqa soo taabtey labo mar. KFUM ayaa qirtey in midnimo uu ahaa mid kamid ah laacibadii ugu fiicnaa ee kooxda u ciyaarayay, xili ciyaareedkii dhawaan soo xirmey.
Midnimo ayaa kooxdiisa cusub ee ULL/KISA lasii joogi doono ilaa bilowga sanadka 2019, maadaama uu saxiixay hesiis labo sano socon doono.
Halkan ka akhri warka rasmiga ee Ull/kisa ee saxiixa midnimo.
Previous articleSu´aashaada caafimaadka hala cabsan ee dhakhtarada soo weydii?
Next articleBooliska Oslo oo baadigoob ugu jiro nin loo maleynayo soomaali oo dhac ka geystay Torshov